IHTC Sensation Vs LG Optimus 2x | I-Androidsis
el_uliulius | | nokuVavanyelwa, LG, Reviews
Kungekudala sipapashe uphononongo olwahlukileyo lweetheminali ezimbini apho iimpawu zalowo nalowo zavavanywa zodwa. Ngoku siza kuqhathanisa ezi fowuni zimbini ukuze ukuba kusekho umntu ongagqitywanga, yiba nentembelo engakumbi yokukhetha elinye lala mazwe mabini ane-Android. Ukuziva kweHTC Vs I-LG Optimus 2x. Yilwa!
Ukuthelekisa kwabo ngaphandle, sithetha ngako iitheminali eziphezulu. I Iimpawu zokugqitywa kwayo zilungile kakhulu. Zombini iiterminal zikhetha ukubonakala okucocekileyo, okungabinamthungo ngaphambili. Isikhuseli-manqaku sesikrini siyadlula kwiqhosha. Inxalenye yangasemva idityaniswe zombini kunye neplastiki kunye nentsimbi. Ngelixa kuyinyani ukuba mhlawumbi IHTC yeyangoku ngokwendlela yoyilo kwaye i-LG inento ebaluleke ngakumbi Ngebhanti yentsimbi apho unokufunda 'ngeGoogle TM'.
Ngokumalunga nezikrini, i-HTC Sensation inkulu kakhulu. I-intshi ezingama-0.3 kunye nesisombululo esiphezulu senza izinto zibonakale ngcono. Iscreen seOptimus 2x sikwi-800 × 600 TFT xa kuthelekiswa ne-penseli ye-960x540 ye-pixel ye-LCD., Ndicinga kule meko, i I-HTC iphuma kunye nesibonelelo. Akukho mahluko ubonakalayo xa uziphatha, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, I-HTC ibonwa kakuhle ngaphakathi nangaphandle kwindawo eninzi yokukhanya.
Ngokubhekiselele kwiikhamera, akukho mahluko mkhulu. Zombini iifowuni zibandakanya ii-8MPx sensors, nangona Ifleshi ye-HTC yi-Double LED kunye ne-LG kuphela kwi-LED enye. Bobabini banayo ikhamera yangaphambili nangona eli xesha i-LG ingaphambi kwe-1.3Mpx phambi kwekhamera ye-VGA ye-HTC. Ngokomgangatho weefoto, akukho mahluko kwaphela. Zombini ziyakwazi ukurekhoda ividiyo kwi-FullHD 1080p oko kuyakwenza ukonwabele ubuhle xa ufika ekhaya xa udlala oko bekurekhodwe ekubekeni iliso kwangaphandle.
Ngokubhekisele kwezinye izixhobo zekhompyutha, siza kuqala sithelekise iprosesa. Zombini zibandakanya Iiprosesa ezibini, nangona i-LG iyi-1GHz Nvidia Tegra kunye ne-HTC yi-1.2GHz Qualcomm. Bakhokela iiprosesa nangona, iifayile ze I-LG inamandla ngakumbi. Akukho mahluko ngokwendlela yokusebenza kweprosesa xa uthetha nge-dual-core kunye nesantya (ewe xa uthetha nge-OS). Ngoku Imemori ye-RAMMhlawumbi kulapho uqala khona umahluko omkhulu wokuqala. Inkqubo ye- I-LG ine "kuphela" i-512MB ye-RAM (i-RAM efanayo ne-nexus One) kwaye i-Sensation inyukela kwi-768Mb ye-RAM, I-256MB ingaphezulu kokuqinisekileyo ukuba iyaxatyiswa (nangona kufuneka isebenze neHTC Sense 3.0). Kwelinye icala i I-LG iza ne-8Gb yememori yangaphakathi, eya kukuvumela ukuba usebenzise inxenye yale nkumbulo njengendawo yokugcina. Inkqubo ye- I-HTC endaweni yoko ine-1Gb yememori yangaphakathi, eya kukuvumela ukuba ufake usetyenziso olwaneleyo ukonwabela ifowuni. Kweli candelo lezixhobo zekhompyutha, zininzi kakhulu. Nangona i-LG ine-priori iprosesa ebhetele kunye nenkumbulo engaphezulu, i-Sensation ine-processor ehlala isondele kakhulu kunye nenkumbulo engaphezulu ye-RAM evumela ukuba ibe nenkqubo enkulu yokuhambisa amanzi.
La Ibhetri kuzo zombini iitermali iyatshatiswa. Ungalindeli ukusebenza ngaphezulu kosuku olunye lweshishini (10-12h) ngayo, kwaye ukuba uchitha usuku ujonga i-Twitter okanye udlala imidlalo, iya kuphulukana namandla. Ukuba awusebenzisi i-terminal, unokukwenza ukuba usuku lwesibini luphile. Zonke ezi zixhobo zinje, ukutshaja xa uyokulala ukushiya indlu ine-100% yebhetri.
Ngokuphathelele Inkqubo yokusebenza ye-LG ilahlekelwa kakhulu. Ihlala nge-Android 2.2 Froyo xa ithelekiswa ne-Android Gingerbread 2.3.3 evela kwi-HTC Sensation. I-Optimus 2x iya kuhlaziywa kungekudala, nangona ndicinga ukuba kufanele ukuba sele ikhutshiwe kunye ne-Android yamva nje. Apha ungabona into eyenziwe yi-LG ukuze akwazi ukuyizisa kwintengiso kuqala kwaye abe neGuinness kwifowuni yokuqala engumbindi wentengiso. Ngokubhekisele kwimo yemizobo, i-LG ayinakwenza nto. I-HTC ene-Sense 3.0 ifezekisile imeko yemifanekiso egqibeleleyo, yona kunye namandla eSensation, eya kukwenza wonwabe nasekubonisaneni neSMS.
Ngokwentsebenzo, Kuzo zombini iitheminali unokufumana amandla afunekayo kwimidlalo yakho okanye kumaxesha akho angasebenziyo. Awuyi kuba nangxaki ekuhambiseni i-Gameloft HD okanye i-EA. Ngelixa kuyinyani, enkosi kumqhubekekisi, Amanqaku e-Optimus 2x aphezulu kwi-Quadrant Benchmark. Ngaphandle koko, i Iziphumo ze-HDMI (ngentambo ifakiwe) kwi-LG Iya kukwenza wonwabe kwiividiyo ze-HD, imidlalo kunye nantoni na oyifunayo esweni. Inqaku elikhulu kakhulu ngokuthanda i-LG, Nangona iSensation inethuba lokudlala kwakhona ekubekeni esweni kwangaphandle ngesihlanganisi se-miniUSB, usebenzisa iadaptha engabandakanyi kwaye ndicebisa i-HTC ukuba yenze njalo ukuze ifumane itoni yamanqaku endaweni yabo.
Akunakwenzeka ukuba ndikhethe enye. I-LG inamandla ngakumbi kuqala, kodwa inememori encinci. Kodwa i-Sensation intle, ine-Sense, kwaye i-screen ibetha kwi-LG. Ukuba bendinako, bendiya kuyilungisa i-Sensation, ngeprosesa ye-LG, ukuphuma kwe-HDMI kunye nememori yangaphakathi. Ndingacebisa nokuba ibenye. Kule meko, kuya kufuneka uye kwizibonelelo zomqhubi wakho ukuze ubone ukuba yeyiphi i-terminal efikelelekayo kwaye yeyiphi oya kuyikhetha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » IHTC Sensation Vs LG Optimus 2x
Umnqweno osisiseko ...
Ndigcina i-Samsung yam galaxy S2. Ukuba ingcono kunezo zimbini kunye. 🙂
Ndiyi kedo ngemvakalelo yam. nakwiimvavanyo zokulinganisa i-lg optimus 2x iphumelele kuba isisombululo sesikrini sisezantsi. kunye nemizekelo i-atrix inombonisi ofanayo k njenge-lg, kwaye inenkumbulo yegusha engaphezulu (1 gb) kunye nesisombululo se-qhd, kwaye oku kwenza uvavanyo lwentsebenzo lube ngamanqaku asezantsi.
Ndigcina i-SGS 2 ^ ^
kwibhentshi ufumana i-approx 2900 okokuqala xa kuqhutywa kwaye malunga nama-3500 ixesha lesibini.
Ngaphandle kwekhamera ye-8 MPX, isiseko se-1,2 GHz, i-1 GB ye-RAM, i-32 GB yangaphakathi, iScreenAmoled Plus screen ...
Ulihlukumeza igama elithi "nangona" kufuneka ulilungise.
Uffff ukuba ndihlala kunye ne-SGS 2 kunye ne-LG Optimus x2, into endicinga ukuba iyamangalisa sisango le-eriyali kwakhona, kodwa ezi HTC azifundanga kuApple andifuni iselfowuni ephulukana nokugubungela. Enye into endingayithandiyo yimemori yayo encinci yangaphakathi xa ngokungagqibekanga zonke zine-8GB kwaye leSensation ine-1GB kuphela. Into endingayithandiyo bubomi bebhetri obufutshane ngaphantsi kosuku olu-1.
Kodwa kuya kufuneka ulibone ixabiso.
IHTC Sensation = € 600 Simahla
I-LG Optimus X2 = € 450 yasimahla ibandakanya intambo ye-HDMI
Ke ngoko isigqibo sam silinde i-LG silindele ukuhlaziywa kwayo kwi-Android 2.3.4 eya kuba ngoJulayi.
Ndiza kukuthengisela imvakalelo yasimahla nge- € 280, ingathi intsha
ukuba ufuna ukunxibelelana: Iirenkile13_4@hotmail.com
Anditshintshi i-2x optimus yayo nantoni na. Kwaye ngaphezulu koku sele sinayo i-1 RC ye-cyanogen, iya ihamba bhetele!
Umntu othile undiphendula ukuba ngaba le 2x inesibane sevidiyo? .. Ndithetha ukuba ndinokurekhoda iividiyo ebumnyameni> ?? .. ukukhanya kuyasebenza? okanye akanalo ……… ..salu2
I-optimus 2x inokhetho lokufaka ukukhanya kwe-flah ngasemva ukurekhoda iividiyo ebumnyameni
Ndigcina uvakalelo lwam lwe-htc = D
Uhlaziyo lweSkype ngeFowuni yeVidiyo ye-Android
IDolphin 6, inguqulelo entsha yesikhangeli sewebhu se-Android